I-China 101.6mm Length Waterjet Abrasive Nozzles Waterjet Abrasive Nozzle kungenye yezinto ezisetshenziswayo kumishini yokusika i-waterjet. abakhiqizi nabaphakeli | Xinhua
Ubude obungu-101.6mm Waterjet Abrasive Nozzles Waterjet Abrasive Nozzle kungenye yezinto ezisetshenziswayo kumishini yokusika i-waterjet.
Amashubhu enkampani yethu okuxuba i-waterjet athuthukiswe yiqembu lamaqembu ochwepheshe esikhathini esiyiminyaka ecishe ibe yi-10. Inezici zokumelana nokugqoka okuphezulu nempilo yenkonzo ende. Impilo yesevisi emaphakathi ingafinyelela kumahora ayi-120.
Phakathi kwazo, ubuchwepheshe benkampani yethu eyingqayizivele ye-tungsten carbide granulation obusetshenziswa kumbhobho wamanzi jet wamanzi okwamanje ungumholi wemboni.
I-Waterjet Abrasive Nozzle ingenye yezinto ezisetshenziswayo kumishini yokusika i-waterjet.
Ukucaciswa kwemibhobho yamanzi ye-waterjet ekhiqizwe yithina kufanelekile ngokuphelele kuzinsizakusebenza ezijwayelekile zamanzi zamanzi, njenge-FLOW, OMAX njll.
Amaphayiphu ethu e-waterjet enziwe ngokugqokwa okuphezulu okungamelana ne-binderless tungsten carbide material (BLTC). Sisebenzisa i-premium nano-particle ye-WC virgin powder futhi siqinisa ekushiseni okuphezulu ngezimo zokucubungula ezilawulwa kahle. Izinto zinobulukhuni bukaVicker HV1 obungaphezulu kwama-2700. Sibe sisebenzisa i-wire EDM ukwenza imbobo ephakathi nendawo nejubane eliphansi i-WEDM ukuqeda imbobo yesikhungo ukucacisa ngezinga le-micron lokunemba. Ukuphela kwendawo kulawulwa ngezansi kweRa 0.8 ngezinyathelo eziningi ze-EDM ephansi.
I-OD (mm) I-ID (mm) UBUDE (mm) KOMATSHINI WAMANZI
7.14 0.76 101.6 IZIMBANGELA ZOKUHAMBA
7.14 1.02 101.6 IZIMBANGELA ZOKUHAMBA
8.0 0.76 101.6 OMAX Imibhobho esemzimbeni
8.0 1.02 101.6 OMAX Imibhobho esemzimbeni
Ukwenza ngokwezifiso kuyatholakala. Uma udinga amanye amasayizi, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Izinzuzo zokusika i-jet yamanzi, ubuchwepheshe bokusika i-jet yamanzi, uma kuqhathaniswa nezindlela zokusika zendabuko, ukusika okubandayo akuguquki izakhiwo zomzimba nezamakhemikhali zento leyo. Amanzi anomfutho ophakeme ahlanganiswe nesihlabathi se-garnet, i-emery namanye ama-abrasives okusiza ukusika, okuthuthukisa kakhulu ijubane lokusika nokushuba kwe-jet yamanzi. Ukusika i-jet yamanzi kusetshenziswe kabanzi ekusikeni ngobumba, ukusika ngamatshe, ukusika ingilazi nensimbi, ukusika izinto ezihlanganisiwe nezinye izimboni eziningi. Njengamanje, kukhona ikakhulukazi ama-3-axis, i-4-axis waterjet ne-5-axis waterjet imishini emakethe.
Langaphambilini Ubude obungu-76.2mm Waterjet Abrasive Nozzles Water Jet Nozzle ngenye yezinto ezisetshenziswayo kumishini yokusika i-waterjet
Olandelayo: Izinduku zeCarbide ezisisekelo
ulaka lwamanzi ompompi bamanzi
Carbide umlomo wombhobho
I-China Water Jet
Ijethi Yamanzi Ephakeme
Amanzi Amabhulashi Omfula Amanzi
Amanzi Jet Nozzle
Umbhobho Wokusika I-Waterjet
Amaphayiphu Wokuxuba Amanzi
I-Waterjet Nozzle Ukuxuba Ishubhu
Izingxenye ze-Waterjet Spare
330mm Ubude Kuqiniswe Carbide Izinduku Product Des ...